Xaruntii Xisbiga oo laga baxay 12 Nov 12, 2012 - 1:55:30 AM
Dawladda hoose ee degmada Garowe ayaa maanta 12 November,2012 waxay mid ka mid aha xarumihii dawladda ka saartay dad ku jiray 21-kii sanno ee la soo dhaafay,waxana ku shaqayn jiray xoghayihi xisbiga xilliggii dawladii hore Somalia.
Qaasim Maxamed Cabdi xoghayaha dawlada hoose ee degmada Garowe oo Radio Garowe
kula hadlay goobta dadka laga saarayey ayaa sheegay in dadka halkan laga saaray ay u diyaariyeen meel ay degaan.
Qaasim ayaa dhinaca kele sheegay in xarunta la soo dejin doono hayadaha ka shaqeeya Daryeelka bulshada,wuxuuna intaas ku daray inay xarumo fara ku tirisa xilliga dad deganyihiin marka la eego xarumihii dawlada kuwaaso lay ka baxayaan dadka ku jira.
Xogahaya ayaa dhinaca kele maanta kormeeray wadada Eng.Khaalid halkaasoo ay ka socoto wado laami la saarayo,wuxuuna sheegay ina wadadan
ay soo dhamaytirmayso laba bilood ka dib.
Halkan ka dhageyso Warbixinta Axmed Cawil Jaamac ka diyaariyey